AMBATARIA FENOARIVO-ATSINANANA : Tranobe efatra may kila forehitra, 26 tra-boina
Nilelalela ny afo tao amin’ny fokontany Ambataria parcelle n°4 Fenoarivo-Atsinanana an-tampon-tanàna, ny alin’ny alatsinainy 2 novambra hifoha ny talata 3 novambra, tokony ho tamin’ny 10 ora sy sasany alina. 4 novembre 2020
Toeram-pivarotana iray manao mofomamy no voalaza fa niavian’ny afo. Hatreto, mbola tsy fantatra mazava ny antony nahatonga ny firehetana. Ao no milaza fa fipoahana entona na “gaz” fandrahoana sakafo no niavian’ny afo. Ao no miteny fa niainga avy tamin’ny “panneau solaire” tao an-tafon-trano no nahatonga izany. Eo koa no manizingizina fa olan’ny herinaratra na “court-circuit” avy amin’ny herinaratry ny Jirama no nampirehitra ilay trano.
Andrasana araka izany ny tohin’ny fanadihadiana.
Vokatr’izao hain-trano niseho tao Fenoarivo-Atsinanana izao, dia tranobe miisa 4 sy trano heva fivarotan’entana miisa 3 no levon’ny afo tanteraka. Olona 26 no tsy manan-kialofana. Fananana maro no lasa lavenona. Anisany may tamin’izany ny hotely Manamaro. Hotely izay efa ela nisiana tao Fenoarivo-Atsinanana ary efa karazany efa vakoka ho an’i Fenoarivo-Atsinanana.
Olana ho an’ny tanànan’i Fenoarivo-Atsinanana hatramin’izao ny tsy mbola fananana fiara mpamonjy voina. Hatramin’izay, dia nataon’ny mpanao politika maro “bala roar” nentina nakana vato tamin’ny fifidianana nifanesy ny fampanantenana hanomezana fiara mpamonjy voina ho an’ny tanànan’i Fenoarivo-Atsinanana izay sady renivohitry ny Faritra Analanjirofo.
Herim-pon’ny fokonolona nampian’ny mpitandro filaminana sy ny tompon’ andraiki-panjakana no nahafahana nifehy ny afo, ny alin’io alatsinainy io. Tamin’ny 1 ora maraina vao voafehy tanteraka ny afo.
Ny talata antoandro, tonga nankahery sy nitondra izay voatsirambin’ny tanana ho an’ireo fianakaviana tra-boina ny governoran’ny Faritra Analanjirofo, Dr Randriamanantena Marcellin. Tolo-tanana nahitana vary, menaka, voamaina, siramamy, koveta, siny, menaka, savony, lambam-pandriana. Fanampiana vonjy maika izao natao izao, hoy izy, fa efa lasa any amin’ny BNGRC nasionaly sy ny Fitondram-panjakana foibe ny tatitra rehetra momba izao hain-trano izao.
Tena mila fijerena akaiky ireto tra-boina ireo fa vehivavy mananotena ny ankabeazany.
Anisany hojerena manokana ny fomba hahafahan’ireo tompon-trano miarina ka ho afaka manorina trano indray, hoy hatrany ny governora.